Momba ny Blue Ventures
Fahasamihafana, fitoviana ary fampidirana
Blue Ventures dia fikambanana miaro ny ranomasina izay mametraka ny olona ho loha laharana. Manohana ireo mpanjono amoron-tsiraka any amin'ny vondrom-piarahamonina lavitra sy ambanivohitra izahay mba hanorina indray ny jono, hamerina ny fiainana an-dranomasina ary hanorina lalana maharitra mankany amin'ny fanambinana.
Roapolo taona lasa izay no nanomboka ny asantsika tany amin'ireo vondrom-piarahamonina lavitra morontsirak'i Madagasikara ary mitombo maneran-tany.
Amin'ny firenena am-polony mahery, miara-miasa amin'ireo mpanjono nentim-paharazana sy fikambanana mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina izahay mba hamolavola, handanja, hanamafy ary hanohana ny fitantanana sy ny fiarovana ny jono eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina.
Manangona mpiara-miombon'antoka amin'ny tambajotra izahay mba hisolo tena ny fanavaozana, ary mizara fitaovana sy fomba fanao tsara indrindra hanohanana ireo vondrom-piarahamonina mpanjono manerana izao tontolo izao.
miankina amin'ny jono mahazatra
Olona 1 miliara
miantehitra amin'ny hazan-dranomasina ho an'ny proteinina
Ampidino ny tatitra isan-taona 2021
Ampidino ny tatitra isan-taona 2020
Tatitra isan-taona momba ny 2019
Tatitra isan-taona momba ny 2018
Tatitra isan-taona momba ny 2017
Tatitra isan-taona momba ny 2016
Isan-taona, miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka bebe kokoa izahay, ary mpanjono maro kokoa eran'izao tontolo izao. Tamin'ny taona 2003, nanomboka tamina vondrom-piarahamonina iray tany atsimo andrefan'i Madagasikara izahay. Ankehitriny, miasa manerana ny firenena 14 manerana ny tany mafana izahay, miaro ny 16,080 km2 amin'ny fonenan'ny ranomasina tena ilaina ary misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona maherin'ny 677,982.